Soo Iibso Xanuunka Xanuunka & Arthritis Scorpion Venom Balm Patch - Rar bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
Xanuun Xanuun & Arthritis Scorpion Venom Balm Patch
Color 32pcs 4bag 8pcs 1bag
32pcs 4bag 8pcs 1bag
Xanuun Xanuun & Arthritis Scorpion Venom Balm Patch - 32pcs 4bags gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nambarka Tusaalaha: D0878
Cabbirka: 10 * 7 cm
Magaca Shayga: Mashiinka Gargaarka Xanuunka / Balaastarka Tiger
Antistress: Spondylosis ilmo-galeenka, Lumbar spondylosis
Duugista: Rheumatoid Arthritis, xanuun caadi ah, iyo xanuun joojiye
Nooca: Muruqyada Wadajirka ah ee Garabka Garabka Xanuunka Xanuunka Ilmo-galeenka
Feature: Shiinaha Shiinaha Geed Far-infrared Nuurad, Lumbar, ilmo galeenka, Spondylosis, Murqaha muruq
Xirmo: 32pcs = 4bags (8pcs in bac)
Nafaqada: 2 sano
Qalab jilicsan oo leh Dhexdhexaad Dhexdhexaad ah oo ku habboon gargaarka murqaha dhabarka dhabarka, jilibka xanuun wadajir ah, garbaha qoorta barafoobay, xanuunka curcurka, daalka cududda, rheumatoid arthritis,
waad u goyn kartaa Patch cabbir kasta oo aad rabto inaad ku haboonaato goobta xanuunkaaga
Ka fogee carruurta inay gaaraan. Haddii wax liqaan, raadso gargaar caafimaad ama la xiriir dhakhtar isla markaaba.
Dhaq gacmahaaga ka hor intaadan xajiska dhigin.
Nadiifi oo qalaji aagga ay dhibaatadu gaadhay.
Laab balastarka oo kala bax filimka si aad u kashifto qayb ka mid ah dhinaca xabagta.
Si toos ah ugu dheji dhinaca dhejiska maqaarka aagga ay dhibaatadu saameysey.
Ka saar filimka balaastigga ah adiga oo gadaal u riixaya
Kaliya mari 1 balastar aagga ay dhibaatadu saameysey, tan ayaa markaa lagu daayaa meesha ilaa 8-12 saacadood.
Dhaq gacmahaaga ka dib marka aad meesha ka saarayso.
Haddii xanuunku soo noqdo 8-12 saacadood ka dib markii la mariyey balastarka koowaad, balastar labaad ayaa la marin karaa. Fadlan ka saar balastarka ugu horeeya ka hor intaadan mid cusub dalban.
dhaawacyada ama maqaarka dhaawacan.
hadaad xasaasiyad u leedahay asbiriin ama saliil.
oo leh suuf kuleyl ah.
markaad dhididayso (sida jimicsi ama kuleyl)
leh, ama waqti isku mid ah, badeecooyinka dalabka kale ee dibedda ah.
Weydii dhakhtar kahor intaadan isticmaalin, haddii aad xasaasiyad ku leedahay alaabada dalabka dibedda ah
ha u isticmaalin si ka duwan sidii lagu faray.
iska ilaali taabashada indhaha, xuubka xabka, ama finka.
Jooji adeegsiga oo weydii dhaqtarka haddii:
xaaladuhu way ka sii darayaan
astaamuhu way sii jiraan in ka badan 5 maalmood.
astaamuhu way kala baxaan oo way dhacaan markale maalmo gudahood.
cuncun, cuncun, ama cuncun maqaarka ah oo xad dhaaf ah ayaa soo baxa.
Haddii aad uur leedahay ama aad naas nuujiso, weydii xirfadle caafimaad kahor isticmaalka.